Lahatsary Fanadihadiana Maro Mampiseho Ny Fampijaliana Ireo Mpitrandraka Vatomena Ao Mozambika · Global Voices teny Malagasy
Rubis no antsoina hoe vatomena ary vakio tsara fa tsy volamena no voasoratra
Voadika ny 31 Jolay 2017 16:49 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Español, Italiano, Português
Famataran-dàlana mankany amin'ny toeram-pitrandrahana vatomena ao Montepuez. Sarin'i Tomás Queface. Nahazoana alàlana.
Mampiseho ny fampijaliana izay voalaza fa hita ao amin'ny toeram-pitrandrahana vatomena ao Namanhumbir, tanàndehibe iray any avaratr'i Mozambika ao amin'ny faritanin'i Cabo Delgado ny lahatsary iray navoakan'ny mpanao gazety mpanao fanadihadiana Lázaro Mabunda tao amin'ny media sosialy.
Amin'ny ankapobeny, hanaovana lavanty lehibe ny vatomena ao Namanhumbir ary ahazoana an-tapitrisany dolara maromaro. Tamin'ny taona 2016, nanambara ny orinasa Gemfields, izay manana foibeny any Londres, fa efa nahazoana 44,3 tapitrisa dolara Amerikana (USD) ny am-pahaenin'ny lavantin'ny vatomena izay nalaina avy amin'ny distrikan'ny Montepuez any amin'ny faritanin'i Cabo Delgado.
In April this year, the newspaper Notícias reported that nearly four thousand miners — both nationals and foreigners– were expelled from ruby and mines in Namanhumbir, as part of operations by the Defence and Security Forces (FDS) aimed at tackling illegal mining in that part of Cabo Delgado province.
Tamin'ny volana Aprily tamin'ity taona ity, nitatitra ny gazety Notícias fa noroahana tao amin'ny toeram-pitrandrahana vatomena sy vato ‘grenat’ tao Namanhumbir ny mpitrandraka teratany sy vahiny efa ho efatra arivo, izay tafiditra ao anatin'ny hetsika nataon'ny Mpitandro ny Filaminana sy Fiarovana (FDS) manenjika ny fitrandrahana tsy ara-dalàna any amin'ity faritanin'i Cabo Delgado ity .
Nilaza ny tatitra avy amin'ny Rádio Moçambique fa toy ny tany miady no hita ao amin'ny toeram-pitrandrahana vatomena, izany dia noho ny fifandirana teo amin'ny orinasa mpihazona ny toerana Montepuez Ruby Mining Ltd sy ny mpitrandraka tsy ara-dalàna izay vondrona ahitana teratany vahiny mikasa ny hanohy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny vatosoa amin'ny fatiantoky ny fanjakan'i Mozambika. Avy any Tanzania, Senegal, sy Somalia ny ankamaroan'ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna , miaraka amin'ny Mozambikana avy any amin'ny faritanin'i Nampula sy Niassa .
Ao amin'ny sary izay nozaraina tao amin'ny media sosialy sy nahazoana fanamarihana avy amin'ny Facebook ho saropady, dia hita miharihary fa tena henjana ny fampijaliana sy ny herisetra ampiharina amin'ireo mpitrandraka ireo ao amin'ny toeram-pitrandrahana vatomena ao Namanhumbir .
Voalaza fa mitranga any Namanhumbir, ao amin'ny toeram-pitrandrahana vatomena izany. Mampalahelo. Fihetsika feno habibiana atao amin'ireo mpitrandraka. Tokony hisy ny fandraisana andraikitra raha marina izany . Tokony ho tazomina ho tompon'andraikitra ireo nahavanon-doza.
Nozaraina in'arivony ny lahatsary fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety ary mahazonana fanehoan-kevitra an-jatony. Nanontany ny fampiofanana nomena ny polisy izay mampihatra ny fampijaliana amin'ny mpitrandraka i Eudito Nhantumbo :
Zava-doza! Manontany momba ny fifantenana ny kandidà hiofana ho polisy aho ary ho an'ny mpampiofana ihany koa aza raha toa ka mianatra momba ny atao hoe ny zon'olombelona izy ireo? Inona avy ireo fepetra fifantenana kandidà hiofana ho polisy?
Nitaraina i Leandro Jaime fa tantanan'ny olona mifandray amin'ny manampahefana ara-politika ao Mozambika ny toeram-pitrandrahana izay resahana eto :
Ahitana mpandraharaha manan-danja lehibe eto amin'ity firenena ity ao amin'ny toeram-pitrandrahana, ary i Samora Machel Jr. no tale, hiasa ve ny fitsarana? Hiandry eny amoron-dranomasina aho mba tsy ho voan'ny fivonkonan-kozatra.
Mihevitra i Abelina Américo fa mitovy tamin'ny vanim-potoanan'ny fanandevozana ny fampijaliana :
Mampalahelo, nihevitra aho rehefa teraka sy nihalehibe fa efa tamin'ny taonjato maro lasa ny fanandevozana, saingy indrisy fa mbola manjaka izany amin'ny fomba ratsy indrindra hanekena ny rahalahy iray hafa.
Mandritra izany fotoana izany, nitaky ny hitazomana ny tompon'andraikitra nahavanon-doza i Ambrósio Olga:
Tokony hotazomina ho tompon'andraikitra ireo lehilahy manao fanamiana ireo noho ny hetsika habibiana izay nataony tamin'ireo olom-pirenena tao amin'ny taniny sy tamin'ny harenan'izy ireo. Tokony hihetsika haingana ny Mpampanoa Lalàna.
Tao anatin'ny antsafa niarahana tamin'ny vohikalam-baovao DW Português, nilaza ny filohan'ny Vaomiera Nasionalin'ny Zon'olombelona, Custódio Duma, fa voaloto indray ny endrik'i Mozambika amin'ity andian-tantara ity ..
Mahatsiravina ny sary. Na inona na inona tsy fanarahan-dalàna nataon'ny mpitrandraka, efa heloka izao fihetsika izao amin'izao fotoana izao. Tsy afa-mijery [izany fihetsika sy toe-tsaina izany] isika ao anatin'ny taonjato faha-21. Tokony nampihatra fomba hafa ny polisy : na inona na inona toe-javatra nitranga tao an-toerana dia tsy izany ny fomba tokony nampiharina tamin'ireo olom-pirenena.
Nitaraina momba ny zava-nitranga ihany koa i Alice Mabota, filohan'ny Ligin'ny Zon'olombelona ao Mozambika, ary nilaza hoe:
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra tokony ataontsika [mba hiatrehana ny karazana tranga toy izany] dia ny manontany ny minisitry ny Fitsarana sy ny Raharahan-Dalampanorenana, ao anatin'ny fiheverana hatrany fa mitaky ny fepetra fampihenana ny fampiasan-kery diso tafahoatra ny fanitsiana isam-potoana ny lalàna .
Ho setrin'izany, nanokatra fanadihadiana noho ny zava-nitranga ny polisy:
https://t.co/Wr3GGwtAX7@welltraveledfox@ChyemennSantos Confirmed, Namanhumbir is in Mozambique nothern province, Cabo Delgado.
Voamarina. Any amin'ny faritany avaratr'i Mozambika Cabo Delgado no misy an'i Namanhumbir .